Football Khabar » कोपा अमेरिकाको क्वार्टरफाइनल पुगेपछि मेस्सीले के भने ?
कोपा अमेरिकाको क्वार्टरफाइनल पुगेपछि मेस्सीले के भने ?
लिओनल मेस्सीको टिम अर्जेन्टिना निकै कठिन अवस्थाबाट ब्राजिलमा जारी कोपा अमेरिका फुटबलको क्वार्टरफाइनल प्रवेश गरेको छ । गत राति भएको खेलमा अर्जेन्टिनाले पाहुना टोली कतारलाई २–० ले हराउँदै क्वार्टरफाइनलमा स्थान बनायो । अब अर्जेन्टिनाले प्रतियोगिताको सेमिफाइनल पुग्न अन्तिम आठमा भेनेज्वेलाको सामना गर्नुपर्नेछ ।
गत रातिको खेलमा अर्जेन्टिनाले संघर्षपूर्ण जित निकाल्दा लोटारो मार्टिन्ज र सर्जियो अगुएरोले गोल गरे । अर्जेन्टिनाले पहिलो हाफ र दोस्रो हाफमा १–१ गोल गरेको थियो ।
सो खेलपछि अर्जेन्टिनाका कप्तान मेस्सीले पत्रकार सम्मेलनमा सहभगी हुँदै खुसी व्यक्त गरेका छन् । उनले आफूहरू अर्को चरण जान सक्षम टिम रहेको बताउँदै नतिजा निकाल्न सकेकोमा खुसी भएको बताए ।
कोपामा अर्जेन्टिनाले ३ खेल खेल्दा मेस्सीले मात्रै १ गोल गरेका छन् । यस प्रतियोगितामा मेस्सी आफ्नो लयमा चल्न सकेका छैनन् ।
‘हामीलाई हाम्रा फ्यानहरूको पागलपना थाहा छ । हामीले यो खेल जुनसुकै मूल्यमा जित्नैपर्ने थियो । जसले हामीलाई सपोर्ट गरे, यो जित उनीहरूका लागि,’ मेस्सीले खेलपछि बोल्दै भने ।
मेस्सीले आफूहरूको अबको यात्रा च्याम्पियनतर्फको रहेको बताए । ‘अब हामी च्याम्पियन यात्राको सुरुआत गर्नेछौं,’ उनले भने ।
मेस्सीले आफूहरू अर्को चरण पुगेपछि टिमको हौसला बढेको बताए । उनले आफूहरूले उपाधि जित्न सबैखाले प्रयास गर्ने पनि बताए ।
‘हामीसँग टोलीमा प्रशस्तै युवा खेलाडी छन् । तर, उनीहरूले यस्ता कठिन अवस्थाका खेल खेलेका छैनन् । उनीहरूसँग अनुभवको कमी छ,’ मेस्सीले भने, ‘हामी युवा खेलाडीलाई पनि साथ लिएर अघि बढ्नेछौं । मेरो लक्ष्य टिमलाई उपाधि जिताउनु हो । ’
मेस्सीले आफ्नो प्रदर्शनबारे पनि धारणा राखे । उनले आफूले पर्याप्त गोल गर्न नसकेकोमा कुनै चिन्ता नरहेको बताए । ‘मैले गोल गरें कि गरिनँ भन्ने ठूलो कुरा होइन, कुरा टिमले जित्यो कि जितेन भन्ने हो,’ मेस्सीले भने, ‘म गोल संख्या बढाउनभन्दा पनि टिमलाई सन्तुलनमा राखेर अगाडि बढाउन चाहन्छु ।’
यस प्रतियोगितामा तीन खेलमा पूरा समय बिताएका मेस्सीले पराग्वेविरुद्धको खेलमा १ गोल पेनाल्टीबाट गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति ९ असार २०७६, सोमबार ०४:५९